घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू डच फुटबल खेलाडीहरू कि-जना होवर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो कि-जना होवर जीवनीले तपाईंलाई आफ्नो बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, व्यक्तिगत जीवन, जीवनशैली र नेट वर्थको बारेमा तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षेप मा, Lifebogger तपाइँ एम्स्टर्डमको हुन जो एक राम्रो डच फुटबलर को इतिहास दिन्छ। हाम्रो कथा कि शुरुआती दिनदेखि सुरु भयो जब उहाँ सुन्दर खेलमा प्रख्यात हुनुभयो।
कि-जना होवरको बायोको आकर्षक प्रकृतिमा तपाईंको आत्मकथा भूख बढाउन, उनको जीवनको यात्राको चित्रण सारांश। कुनै श doubt्का बिना, यसले उसको कथा भन्छ।
की-जना होवरको जीवनी। उनको प्रारम्भिक जीवन र उदय हेर्नुहोस्।
हो, तपाइँ र मलाई थाहा छ डच स्टारलेटले सब जस्तो भयो जुल्स कौंडे। उसको प्यारा सुन्दर देखि उनको प्रभावशाली खेल को शैली। त्यसमध्ये कुनै छक्कलाग्दो कुरा होइन फुटबलको १-बर्षे पुराना पदार्पणकर्ता.
प्रशंसकको बाबजुद पनि हामीले बुझेका छौं कि फुटबल फ्यानहरू केवल थोरैले उनको बायोको गहन संस्करण देखेका छन्। Lifebogger यो तयार गरेको छ, केवल तपाइँ र खेल प्रेम को लागी। धेरै समय बर्बाद नगरी, आउनुहोस्
की-जना होवर बचपन कहानी:
जीवनी सुरुवातीहरूको लागि, उहाँ उपनाम "कि" लिनुहुन्छ। कि-जना डेलानो होवरको जन्म जनवरी २००२ को १ 18 औं दिनमा उनकी आमा मरियाना होभर, र बुबा इवान होभर, नेदरल्याण्ड्सको राजधानी एम्स्टर्डममा भएको थियो।
उनको जन्म पछि, उनका आमाबुवाहरूले उनको नाम कि-जना कार्टर राखे - एक अमेरिकी खेल व्यक्तित्व। तल चित्रण गरिएको छ, कार्टर एक रिटायर्ड अमेरिकी फुटबल खेलाडी हो जसलाई कि-जना होभरका बुबा (इवान) उच्च सम्मानमा राख्छन्। यस व्यक्तिको लागि उनको अथाह प्रेमको कारण, उनले आफ्नो छोराको नाम वहन गरेर उनलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरे।
की-जना होवरका आमा-बुबाले आफ्नो छोराको नाम यस अमेरिकी फुटबलरको नामाकरण गरे।
स्पष्ट उद्देश्यका लागि, अमेरिकी फुटबलर कार्टरको जन्म वेस्टरविले, ओहायो, संयुक्त राज्यमा भएको थियो। ऊ क्यानेथ लियोनार्ड कार्टरको पूरा नाम राख्छ। ध्यान दिनुपर्ने बुँदा: "कि-जना" उहाँको उपनाम हो र उहाँकै वास्तविक नामको अंश होईन। अचम्मको कुरा, कार्टरले यो उपनाम फिल्मको एक पात्रबाट 'शाफ्ट इन अफ्रिका' बाट पाए।
यसैबाट उनको नाम "कि-जना" उत्पन्न भयो।
सानो की-जना आफ्नो बुबा (इवान) र आमा (मारियाना) को एक मात्र बच्चाको रूपमा जन्म भएको थियो। डिफेन्डरले आफ्नो शुरुआती वर्षहरू पिस्टर लोडेविज टकस्ट्राटको एम्स्टर्डमको छेउमा बिताए। त्यहाँ, उहाँसँग केही मनपर्ने फुटबलका सम्झनाहरू थिए - खुशीयाली बचपनको संकेत।
यदि तपाईंलाई थाहा भएन, जहाँ की-जना हुर्केका हुन् जोहान क्रुइज एरेनाका लागि ढु a्गा मात्र। यो Ajax फुटबल क्लब को स्टेडियम हो। नक्शाको प्रमाणले देखाउँदछ - कि स्टेडियम केवल १० मिनेटको ड्राइभ हो जहाँबाट होभरको परिवार बस्थे।
त्यतिखेर, केटाको रूपमा, सानो की-जना आफ्नो परिवारको घरमा बस्नेछ जहाँ उसले अजाक्स समर्थकहरूको शोर उल्लास सुनेको छ किनकि उनीहरू आफ्नो टोलीका लागि पागल हुन्छन्।
यो यस्तो सुन्दर युफोरिया थियो। सानो छोरालाई थाहा थिएन - कि उसको भाग्यमा एक पेशेवर फुटबलर बन्नेछ।
की-जना होवर पारिवारिक पृष्ठभूमि:
डच फुटबलर एक खेल परिवारबाट आउँदछ। के तपाईंलाई थाहा छ?… कि-जना होवरका आमा-बुबामध्ये एक - उसका बुबा इवान - पूर्व अमेरिकी फुटबल खेलाडी थिए। कि-जना कार्टरसँग त्यहाँ कुनै सम्बन्ध छैन कुनै आश्चर्यको कुरा होइन - इभानले आफ्नो छोराको नाम पछि नै राखेका थिए।
तथ्य यो हो कि उनका बुवा पूर्व अमेरिकी फुटबलर थिए भन्ने देखिन्छ कि उसको परिवारले हुनुपर्दछ - एक पटक संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्थ्यो। हामीलाई के थाहा छ, मारियान र इभान नेदरल्याण्ड्सका लागि अमेरिका छाडे - जहाँ उनीहरू की - उनको छोरा थिए।
की-जना होवर पारिवारिक उत्पत्ति:
तपाईं र मलाई थाहा छ उहाँ नेदरल्याण्ड्सको एम्स्टर्डममा जन्मनुभएको थियो। तर पारिवारिक जराको हिसाबले, डच स्टारलेट सूरीनामि वंशको हो। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, सुरिनामीहरू सुरिनाम नामको देशका हुन्। तिनीहरू राम्ररी एकजुट भएका छन् र उनीहरूको सुन्दर, Mulatto मिश्रित जाति छाला टोनका लागि परिचित छन्।
सुरिनामीहरू एकजुट र सुन्दर छन्। हामी भर्जिन भोज डिजक र कि-जना होवरको सुन्दरतामा अचम्म मान्दैनौं
नक्शाबाट अवलोकन गरिए अनुसार यो दक्षिण अमेरिकाको उत्तरपूर्वी तटमा अवस्थित एउटा सानो देश हो। कि-जना डच सुरिनाम जातीयताको साथ उल्लेखनीय फुटबलरहरू मध्ये एक हुन्। उल्लेखनीय उदाहरणहरूमा एडगर डेभिड्स, क्लेरेन्स सीडोर्फ र प्याट्रिक क्लाइभर्ट सामेल छन्।
नक्शाले बताउँदछ कि कि-जना होवरका अभिभावकहरू कहाँबाट आएका हुन्। यी तीन किंवदन्तीहरु सुरीमानेका हुन्।
के तपाईंलाई थाहा थियो? ... २०२१ सम्म, हामी तीन ईपीएल फुटबलरहरूबारे जान्दछौं जसका आमा-बुबाका सुरिनाम छन्। तिनीहरू समावेश छन् Georginio Wijnaldum, Spurs स्टीवन बर्गविज र लिभरपूल Virgil van Dijk। अब हामी हेर्छौं किन हाम्रो केटाले पहिले रेडमा सामेल हुन छनौट गर्‍यो।
की-जना होवर शिक्षा:
उनीहरूको बच्चालाई स्कूलमा राख्नु मेरियान र इभान होभरको प्राथमिकता थियो। प्रारम्भमा, कि-जना बर्लाज लाइसेममा उपस्थित भए। एम्स्टर्डम, नेदरल्याण्ड्सको पिटर लोडेविज टकस्ट्राट जिल्लामा यो एक द्विभाषी विद्यालय हो।
की-जना होवरको शिक्षा। उहाँ बर्लेज लाइसेममा उपस्थित हुनुभयो।
राम्रो अभिभावकीय पालनपोषणका लागि धन्यवाद, कि-जनाले स्कूली शिक्षा र फुटबल बीच सन्तुलन फेला पारे। जब समय आयो सही थियो, गन्तव्य बोलाइयो।
की-जना होवर फुटबल कहानी:
खेललाई आफ्नो पेसाको रूपमा लिने उनको चाहना बुझेर मारियान र इभानले आफ्नो आकांक्षालाई समर्थन गर्न सम्भव भए। आफ्नो साथी साथी जस्तै (Myron Boadu), कि-जना AZ Alkmaar मा युवा वर्गमा शुरू भयो।
एजेड युवा एकेडेमीमा, उनले आफ्नो क्यारियरको जग बसाले, उनीहरूको सबैभन्दा बढ्ता बच्चा हुने क्रममा। कि-जनाको गेमप्ले एजेक्सलाई आकर्षित गर्‍यो, जसले आफ्ना बाबुआमालाई छोरामा सामेल गराउन अनुरोध गरे। एकेडेमीलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो परिवारको घरको नजिक थियो, कि-जानले २०१ 2014 मा डे टोकमस्ट रंगहरू लगाउन शुरू गरे।
युवा कि-जना होवर एजेक्स मा - धेरै राम्रो देखिन्छ।
AFC Ajax युवा एकेडेमीको साथ प्रारम्भिक जीवन:
सबै अपेक्षाहरू पूरा गर्ने क्रममा, कि-जनाले क्लबसँग जीवनको सहज सुरुवात गरे। फिर्ता पछि, उहाँ केन्द्र-आधा र दायाँ-पछाडि दुवै जना असाध्यै आरामदायी व्यक्तिको रूपमा वर्णन गरिएको थियो। नबिर्सनुहोस्, हाम्रो केटा एक फ्रीकिक विशेषज्ञ पनि थिए।
लोरेस कारीस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एजेक्समा, कि-जना हूवरसँगै खेल्‍यो रायन gravenberch - अब एक पल पोगाबाजस्तो सुपरस्टार। ऊ यो रमाईलो बच्चा थियो जुन अतुलनीय फुटबल शक्तिले उसलाई प्रतिद्वन्द्वीहरूको बिरूद्धमा फ्रिफोर बनायो।
कुनै समय मा, बलको साथ होभरको चिपचिपा नियन्त्रणले अन्य देशहरू, विशेष गरी इ from्गल्यान्डका ठूला क्लबहरूको आकर्षण लिन थाल्यो। तिनीहरू म्यान सिटी, चेल्सी र लिभरपूल समावेश गर्दछ।
आफ्नो एकेडेमी वर्षहरूमा, उनले एक वयस्कको मानसिकता विकास गरे। कि-जनासँग खुल्ला दिमाग थियो आफ्ना विचारहरूलाई ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्ने। ऊ कुनै पनि क्लबमा जानको लागि धेरै उत्सुक थियो जसले उसलाई छिटो बढ्ने बनाउँदछ। धेरै युवा उमेरमा यस्तो मानसिकताले साँच्चै अजाक्सलाई चिन्तित तुल्यायो।
द इ England्ल्यान्ड स्टोरी:
किशोरीको हस्ताक्षरको लागि गम्भीर प्रतिस्पर्धा भएको अवलोकन पछि एजेक्सले उनीहरूको सबैभन्दा खराब डर पुष्टि गरे। वास्तवमा लिभरपूल, म्यानचेस्टर सिटी, म्यान युनाइटेड र चेल्सी सबैको आँखा उनीहरूको बहुमूल्य रत्नमा थियो।
कि-जना एक डच पेशेवर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न उमेरको उमेरका थिएनन्, नियम यो थियो कि - विदेशी क्लबहरूले उसलाई साइन इन गर्न अनुमति दिइन्छ - सस्तोमा पनि। के भयो एजेक्सको सबैभन्दा ठूलो डर यकिन भयो कि लिभरपूलले कान्छी प्रतिस्पर्धामा ती युवाको परिवारको नजिक जान थाले।
इ England्ल्यान्ड क्लबले कि-जना होभरका आमा-बुबालाई भेट्टाए - उनीहरूको घरमा- आफ्नो छोराको हस्ताक्षर खोज्न। पछि, होभर र उनको परिवारलाई मर्सीसाइडमा आमन्त्रित गरियो, जहाँ उनीहरू क्लबको खेलकुद सुविधा र कर्कबी बेस (उनीहरूको विदेशी एकेडेमी प्रशिक्षण केन्द्र) वरपर देखाइएका थिए।
इभान र मारियान होभर विश्वस्त भएपछि, मर्सीसाइड क्लबले एउटा ट्रान्सफर शुल्क आरम्भ गर्‍यो जसले एजेक्सलाई रीस उठायो। तपाईंलाई थाहा छ?… लिभरपूलले कडा प्रतिस्पर्धालाई हरायो the sign ००,००० को लागि अद्भुत साइन इन गर्न। एजेक्स विशेष गरी सस्तोमा, खेलाडी गुमाउन अत्यन्त निराश भएको खबर थियो।
ईसाई एरिक्सन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य
कि-जना होवर जीवनी - फेम कहानी फेड:
उदीयमान डच स्टारले अगस्ट २०१ 2018 मा लिभरपूलको लागि आफ्नो यात्रा पूरा गर्यो तर अन्तर्राष्ट्रिय निकासीको लागि एक महिना कुर्नुपर्‍यो। तीन महिना पछि, होभरले लिभरपूल पहिलो टीमको साथ प्रशिक्षण सुरु गरे। जर्जेन क्लप्प उनको वर्णन "एक आत्मविश्वासी केटा जसले उसलाई खुशी पार्दछ।"
आफ्नो लागि नाम कमाउने सब भन्दा ठूलो अवसर January जनवरी २०१7मा आए। कि-जनालाई वोल्वरहेम्प्टन वान्डरर्स बिरूद्ध एफ ए कप खेलको लागि बोलाइएको थियो। एक विकल्पको रूपमा, की-जना जोवरले एक घाइतेको ठाउँ लिए Dejan Lovren सुरुको मिनेटमा।
एक उत्कृष्ट प्रदर्शनले कि-जना एफए कपको सबैभन्दा कान्छो लिभरपूल खेलाडी बन्ने देख्यो। विरोधी विपक्षी प्रबन्धकको आँखा समेतनुनो एस्पिरिटो-सान्तो) पकड गर्न सकेन - की-जना होवरको प्रशंसामा।
Nunu Ki-Jana मा स्तब्ध भयो। ऊ प्रेममा परिणत भयो र क्लोपले उनलाई लिभरपूलमा राख्न संघर्ष शुरू गर्यो।
वोल्भ्ससँगको उत्कृष्ट प्रदर्शनपछि, क्लोपले युवा डचहरूको लागि ठूलो समानता प्रदर्शन गर्न शुरू गरे। त्यो पनि ठूलो जिम्मेवारीको साथ आयो। के तपाईंलाई थाहा थियो?… कि-जना होवर मार्किंगको विशेष भूमिका तोकिएको थियो मोहम्मद सालाह प्रशिक्षण सत्रको समयमा। अनुभवको बारेमा, उनले एक पटक भने;
ट्रेंट अलेक्ज्याण्डर-अर्नोल्ड पहिले नै नथनेल क्लिनको हाकिम थिए। की-जनाको उदयले उनलाई लिभरपूल पहिलो choise ठीक फिर्ता बन्ने आशा छाएको थियो।
म्याच पछि, KLOPP मलाई बताउनुहोस् SADIO MANÉ, र मोहम्मद सलाह व्यवहारमा मेरो विपक्षी हुनेछ।
पहिलो पटक तपाईं सोच्नुहुन्छ: वाह, त्यो छ वर्ल्ड क्लास। यो मेरो लागि अति नै महत्वपूर्ण थियो किनकि मैले उनीहरूको गतिमा अपुग राख्न यो कठिन लाग्छ।
सबैलाई हेर्न म खुशी छु कि म कतै पनि पटक्कै छैन र मलाई धेरै भरोसा दिन्छु। सालाह र मलाई छान्दै, म ती सबै मलाई अवश्य शोषण गर्ने प्रयास गर्दछु। मेरा भाइहरू, भर्जिल र जीनी मलाई पनि धेरै मद्दत गर्छन्।
उसको गतिलाई धन्यवाद, हाम्रो केटाले राम्रो काम गरे। ट्रेंट अलेक्ज्याण्डर-अर्नोल्ड उहाँसँगै पहिले नै उहाँसँगै, की-जना होवरको अचानक वृद्धि भयो नाथानील क्लाइन लिभरपूलसँग अस्वीकार गर्नुहोस्। युवा डच पूर्व इ England्ल्यान्डको दायाँ पछाडि रेड छोड्दा जिम्मेवार थिए।
की-जना होवर बायो - सफलता कहानी:
वर्ष २०१ the डचकर्मीको क्यारियरको लागि महत्वपूर्ण मोड बनेको छ। लिभरपूलको कर्तव्यबाट टाढा उनी आयरल्यान्डको U2019 यूरोपीयन च्याम्पियनशिपमा भाग लिन गए। की-जनाले नेदरल्यान्ड्सलाई टुर्नामेन्ट जित्न मद्दत गरे जुन फाइनलमा इटालीसँग प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
की-जना होवरको प्रारम्भिक राष्ट्रिय सफलता। २०१ U यूईएफए यूरोपियन अण्डर १ Champion च्याम्पियनशिप।
जीत पछि, उनी टूर्नामेन्टको टीमको बीचमा नामित भए। लिभरपूलमा फर्केर जाँदा, हूभरले उसको वरिपरि घेरिएको प्रचारको लागि बाँच्न छोडे। कुनै समय मा, उदाउँदो तारा रेड्स संग एक दीर्घकालिक व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
तपाईं, एक पूर्ण सहभागी हुनुहुन्न, कि-जना होवर आफ्नो नाम दशकको सबैभन्दा ठूलो ट्राफियां जित्ने दन्त्यकथाको सूचीमा आफ्नो नाम जम्मा भएको देखेर खुशी भए।
उसले लिभरपूल प्रो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको दुई महिना पछि, तीक्ष्ण डिफेन्डर उच्च उडान गर्न थाले। १ years बर्ष, आठ महिना र दश दिनको उमेरमा, कि-जना होभर लिभरपूलका लागि बेन वुडबर्नको पछाडि गोल गर्ने चौथो कान्छी खेलाडी बन्नुभयो। माइकल ओवेन र जोर्डन रोसिटर।
उनले सम्मान पाइसकेपछि, एक पुरानो प्रशंसकले उनीप्रति आफ्नो चासो पुन: देखायो। होभरको खेल पढ्नको क्षमता, उसको हवाई शक्ति, वेग र कम्पोजरले नुनो एस्पिरिटो-सान्तोले उहाँलाई शीर्ष स्थानान्तरण प्राथमिकताका रूपमा राख्यो।
मट डोहर्टीको Spurs मा प्रस्थान पछि, की-जना होवर मोलिनेक्समा सरे। अर्कोतर्फ, लिभरपूलले ब्वाल्भ्समा हस्ताक्षर गर्यो Diogo Jota। युवा डचले डोहर्टीको नम्बर दुई शर्ट बनाए।
की-जना होवरको जीवनी लेख्दा, ऊ वोल्भरहेम्प्टन शहरको नयाँ जीवनमा अनुकूल छ। यति मात्र हैन, ऊ आफैंलाई ठूलो प्रतिस्पर्धाको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ नेल्सन सेमेडो। क्लबमा सामेल भएपछि कि-जनाको बयानले उसको ठूलो महत्वाकांक्षाको बारेमा धेरै बताउँछ।
धेरै प्रशंसकहरूको लागि, यो समयको कुरा हो यो भन्दा पहिले उनी भोल्फ र नेदरल्याण्डको पहिलो छनोट दाया-पछाडि हुन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, संसारमा सबै भन्दा राम्रो दाहिने-पछाडि। बाँकी, हामी भन्छौं, होभरको बायो इतिहास हो।
की-जना होवरकी प्रेमिका र पत्नीको बारेमा:
पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, की-जान जस्तो सुन्दर कोही अविवाहित हुनु पर्छ भन्ने कुरालाई इन्कार गर्न मिल्दैन। प्यारा डच डिफेन्डर पछाडि, एक ग्लैमरस प्रेमिका अवस्थित छ। कि-जान यति धेरै उसको राम्रो-टोन्ड र कर्भी प्रेमीमा छ।
की-जना होवरकी प्रेमिकालाई भेट्नुहोस्। यी दुईहरू प्रत्येकको लागि उपयुक्त छन्।
होवर र उनको प्रेमिका बाल्यकाल प्रेमीहरूको रूपमा डेटि began गर्न थाले। दुबै आफ्ना आमा बुबाबाट सम्बन्धको आशिष् माग्दै छन्, जो सहमत छन् तिनीहरू सँगै बस्छन्।
कि-जना होवरकी प्रेमिका निस्वार्थ व्यक्ति हुन् जसले उनको मान्छेलाई भावनात्मक सहयोग प्रदान गर्ने बाहेक अरू केही गर्दैनन्। उनीले पनी यसको मतलब उनको आफ्नै जीवन र क्यारियर होल्ड गरीएको छ। तिनीहरू दुबै समुद्र किनारका छुट्टी गन्तव्यहरू भ्रमण गर्न मन पराउँछन्।
यो मनमोहक तरिका हो जुन उनीहरूले रमाइलो गर्छन्।
कसरी यी दुबै आफ्नो सम्बन्धमा रमाईलो गर्दैछ भन्ने कुराको आधारमा हामी एउटा चीजको बारे निश्चित छौं। एउटा प्रस्ताव र विवाह तिनीहरूको अर्को औपचारिक कदमहरू हुनेछन्।
की-जना होवर निजी जीवन:
एक छिटो दायाँ पछाडि हुनु को पक्ष, फुटबल बाहिर बाहिर उसको व्यक्तित्व चिन्न तपाईं उसको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। अब प्रश्न ... कि-जना होवर को हो?
की-जना होवरको व्यक्तिगत जीवन - व्याख्या।
सर्वप्रथम पहिलो, ऊँ मकर राशिको बीचमा छ। की-जनाको बारेमा सबै कुराले समय र जिम्मेवारी प्रतिनिधित्व गर्दछ। डच फुटबलरसँग स्वतन्त्रताको आन्तरिक अवस्था छ जुन उसलाई आफ्नो क्यारियर र व्यक्तिगत जीवनमा द्रुत सकारात्मक निर्णयहरू र प्रगति गर्न सक्षम गर्दछ।
आफ्नो जीवनी मा ध्यान दिएझैं, कि-जना १ 16 वर्षको धेरै कोमल उमेरमा विदेशी स्थानान्तरणमा सहमत हुन थाल्यो। तपाईं अधीर व्यक्ति हुनुहुन्छ, ऊ कहिलेकाँही वातावरणको परिवर्तन चाहन्छ। अभिभावक र परिवारका अन्य सदस्यहरूको समर्थनमा, उनले अहिले सम्म केहि ठोस र यथार्थपरक निर्णय गरेका छन्।
ऊ कडा अनुहारबाट कसरी पिचमा गम्भीर हुन्छ भन्ने कुराबाट धोका नउठाउनुहोस्। कि-जाना हास्यको ठूलो भावनाको साथ त्यस्तो शान्त व्यक्ति हो। हामीलाई थाहा भयो कि जब उनले नेदरल्यान्ड्स २०१ F फिफा यु -१ World विश्वकप १ Nige को नाइजेरियाको बिरूद्ध १ before को अगाडी टूरमा प्रशंसकहरू लिएका थिए।
की-जना होवर लाइफस्टाइल:
हामी सबैलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ कि उहाँ कोमल व्यवहार र अधीर हुनुहुन्छ। अन्यथा, कि-जना अजाक्स र लिभरपूलसँगै बसेका हुन्थे। यहाँ हामी तपाईंलाई उसको जीवनशैलीको बारेमा बताउनेछौं।
उसको घरको बारेमा:
हजारौं पाउन्ड कि आफ्नो जेब मा गए बावजुद, कि-जना एक पटक आफ्नो लो-कुञ्जी अपार्टमेन्टमा एक सामान्य जीवन बिताए। तलको चित्रले उसको जीवनलाई कसरी हेर्छ भन्ने सारांश दिन्छ - एक नम्र केटाको रूपमा। कि-जना र उसकी प्रेमिका साझा घर जस्तो देखिन्छ।
की-जना होवरको घरले उसको जीवनशैलीको बारेमा धेरै बताउँछ।
के उसको कार छ?
एक राम्रो पालनपोषण को लागी धन्यवाद, कि यति नम्र र ग्राउन्ड रहन्छ। उसको जीवनको यस चरणमा उसलाई गाडीको आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ। हाम्रो केटाले पदयात्रा वा बाइकलाई प्रशिक्षणमा लैजान्छन्।
कि-जना होवर यस्तै विनम्र केटा हुन् जो एक सरल जीवनशैली बिताउँछन्।
की-जना होवर पारिवारिक जीवन:
एम्स्टर्डम-मा जन्म डिफेन्डर आफ्नो क्यारियर को बारे मा लिन्छ महत्त्वपूर्ण निर्णय को लागी उसका आमा बुबा मा निर्भर गर्दछ। सत्य यो हो कि कि-जना तिनीहरूलाई जीवनको सब भन्दा ठूलो आशिष्को रूपमा देख्दछन्। यो खण्डले उनीहरूमा थप तथ्यहरू ल्याउँछ।
की-जना होवरका अभिभावकहरूको बारेमा:
अरू धेरै बुबा र आमालाई जस्तै, इभान र मारियानको लागि लिभरपूलमा यति जवान छ कि छैन भनेर हेर्न सजिलो थिएन। १ 16 वर्षको उमेरमा इ England्ल्याण्ड आउँदा, कि-जना होवरका आमा-बुबाले उनलाई एक पाहुना परिवारसँग परिचय गराए। युवाले राम्रो सम्बन्ध राख्यो, एउटा यस्तो उपलब्धि जसले ब्रिटिश संस्कृति सिक्न मद्दत गर्‍यो। साथै, हाम्रो केटाले कसरी अधिक बेकन र अण्डाहरू खान सिक्नुभयो।
मारियाना र इभान प्राय: साताको अन्त्यमा की-जान भ्रमण गर्दछन् - कोरोनाको बाहेक। त्यो गाह्रो समयमा, होभरकी आमाले सुनिश्चित गरिन् कि उनको छोराले आफूले मनपर्ने मनपराउने पास्ता भन्दा पर खाना पकाउने थप पाठहरू प्राप्त गरे। जवानले एक पटक भने;
औपचारिक रूपमा, म यस क्लबमा खाँदछु जब मेरा बाबु र जेलफ्रेन्ड आउँदैनन्। COVID DURING, म समय बाँच्न एक्लै बाँच्न प्रयोग गर्न।
बुबा र आमाको आफ्नो पहिलो अनुभव:
Of जनवरी को दिन, जी-जानले १ Li बर्षको उमेरको रूपमा लिभरपूलबाट डेब्यू गर्नुभयो। उनका अभिभावक एम्स्टर्डमबाट देखेका थिए। तिनीहरूको आशाको विपरित, उनीहरूले अन्तिम मिनेटमा उसलाई मैदानमा राख्ने आशा गरेका थिए। खेलको 7th औं मिनेटमा उनी घाइते देजन लोभ्रेनको लागि भइरहेको देखेर उनीहरू छक्क परे। एक परिवार मित्र को शब्दहरु मा;
कि-जनाको आमा मारिएन केवल पागल भए।
इवान उसको बुबाका लागि, त्यो उनको जीवनमा अत्यन्तै खराब 84 XNUMX मिनेट थियो। आईटी यति डरलाग्दो भएको कारण कि मध्यवर्ती खेल्न र सही पछाडि नभएको कुरा बताइएको थियो।
धन्यबाद, बोइ एकदम राम्रो भयो, र लिभरपूलले मैच बचायो।
बाल्यावस्था उनको बुबा र आमा को लागी शुभकामना:
केटाले, कि-जनाले वाचा गरे - जब उनी एक पेशेवर हुन्छन्, उसले सुनिश्चित गर्नेछ कि उसको आमा बुबाले अब काम गर्नु पर्दैन। अब यहाँ ऊ छ, तर इभान र मारियान सधैं जहिले पनि उनीहरूले काम गर्नु पर्छ भनेर भन्छन्। खेलबाट सेवानिवृत्त भएपछि, कि-जना तिनीहरूलाई एम्स्टर्डममा सम्मिलित हुने आशा राख्दछन्।
कि-जना होवर तथ्यहरू:
यहाँ हामी तपाईंलाई अधिक चीजहरू बताउँदछौं जुन तपाईंले कि-जना होवरको बारेमा कहिले पनि जान्नुहुन्न। यो द्रुत डचम्यानको जीवनीको अन्तिम अंश हो।
तथ्य # १ - उनीसँग भेल्भो फ्यानको मनमोहक गीत छ:
ब्रिटिश फुटबल प्रशंसकहरू प्राय: नम्बर एक श्रेणी गर्दछन् जब यो समर्थकहरूको बौद्धिक मंत्रको लागि आउँदछ। ब्वाँस प्रशंसकहरूले कि-जना होवरका लागि एक बनाएका छन्। यसको शीर्षक छ - 'हाम्रो दाहिने-हात तिर डच कि'। यहाँ गीत जान्छ;
तथ्य #2- की-जना होवर ट्याटूको अर्थ:
उसको शरीर कला उनको कथा बताउँछ। कि-जनाको देब्रे पाखुरामा ट्याटूहरू समात्दछ, जुन निम्न समावेश गर्दछ। पहिलो, आफ्ना बाबुआमाको नाम। दोस्रो, आफ्नो हजुरआमाको मृत्युको मिति।
तथ्य # - - उसले प्रत्येक सेकेन्डमा कती बनाउँछ:
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो की-जना होवरको जैव, यो उसले कमाएको हो।
ब्वाँसको तलब ब्रेकडाउन (£)
प्रति वर्ष: £ 2,100,000
प्रति महिना: £ 175,000
प्रति हप्ता: £ 40,322
प्रति दिन: £ 5,760
प्रति घण्टा: £ 240
हरेक मिनेट: £ 4
प्रत्येक सेकेन्ड: £ 0.07
की-जना होभर जहाँबाट आउँदछन्, औसत डच नागरिकलाई वार्षिक 36,500 67, e०० यूरो कमाउनेलाई earn XNUMX बर्षको आवश्यकता पर्दछ जुन फुटबलरले ब्ल्भ्ससँग एक वर्ष बनाउँछ।
तथ्य #4- FIFA को भविष्य:
यदि तपाईं फिफामा केही उत्तम युवाहरूको वरिपरि स्क्वाड निर्माण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हामी की-जना जस्तो स्टारहरू सिफारिस गर्छौं। जोशुआ Zirktzee। यी केटाहरूले तपाईंको टीमलाई परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछन्। कीको हालको समग्र मूल्या rating्कन र सम्भाव्यताबाट धोकामा नपर्नुहोस् किनभने जब कि तपाईंले पिचमा उसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँ भन्दा त्यस भन्दा बढी छ।
यहाँ जि-जना होवरको फिफा वृद्धि परीक्षणको प्रमाण छ जुन तपाइँले महसुस गराउनुहुनेछ कि उहाँ एक दायाँ पछाडि सबै भन्दा राम्रो लुकाइएको रत्न हो। हेर, एक नर्वस किशोर देखि एक सुपरस्टार को लागि आफ्नो यात्रा को एक भिडियो।
तथ्य # - - कि-जना होवरको धर्म:
सुरिनामको प्रमुख विश्वास, जहाँ उनको परिवार आउँदछ, इसाईमत हो। की-जान डच सुरिनाम ईसाईहरूको बहुमतमा मिल्छ। तपाईं एक ईसाई घरमा जन्मनुभएको हो, फुटबलर सायद सार्वजनिक रूपमा उसको धार्मिक विश्वास देखाउँदछ।
तथ्य #6- कि-जना होवरको एजेन्ट:
TransferMarket अनुसार, SEG - खेल मनोरञ्जन समूह Ki की क्यारियर को हरेक पक्ष हेरिन्छ। उनीहरूले त्यसो गर्छन् किन उसलाई फुटबल खेल्नमा ध्यान दिन। चाखलाग्दो कुरा के छ भने कम्पनीका केहि ठूला ग्राहकहरू हुन् मेम्फिस डिप्टी, डेनिश फुटबलर - कास्पर डलबर्ग र Quincy Promes.
जीवनी पूछताछ र विकी उत्तर:
उसको सम्झनाको छोटो सारांशमा मद्दत गर्न, हामी तपाईंको उपभोक्ताको लागि हाम्रो विकी टेबल तयार गरेका छौं।
पूर्ण नामहरू: की-जना डेलानो होवर
जन्म मिति: जनवरी 18 को 2002th दिन
जन्मस्थान: एम्स्टर्डम, नीदरल्याण्ड
अभिभावक: मारियाना होवर (आमा) र इवान होवर (बुबा)
सिबलिंग: कुनै भाइ वा बहिनी छैन
पारिवारिक मूल: सुरिनाम, दक्षिण अमेरिका मा एक देश।
राष्ट्रियता: नेदरल्याण्ड र सुरिनाम।
एजेन्ट: SEG - खेल मनोरंजन समूह
नेट मूल्य: २ लाख पाउन्ड (२०२१ तथ्या )्क)
उचाइ: १.1.83 ० मिटर वा feet फिट inches इन्च
शिक्षा: Berlage Lyceum स्कूल
साँचो बजाउने स्थिति: केन्द्र-पछाडि र दायाँ पछाडि
एकेडेमीहरू उपस्थित: AZ, FC Utrecht र लिभरपूल
एक केटो जसले प्रो फुटको कल्पनाको साथ केवल फुटबल खेल सुरू गर्दछ ठूलो अभिलाषा बिना सफल हुन सक्दैन। की- Jana - जस्तै Ademola Lookman - उत्कृष्टताको लागि निरन्तर महत्वकांक्षा थियो। यसले उसलाई आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। डच फुटबलरले आफ्नो युवा उमेरको बावजुद आफ्नो क्यारियरमा धेरै हासिल गरेको छ - २००२ मा जन्म।
हाम्रो की-जना होवरको जीवनी एउटा चीज बनाउँछ। कि हामी चीजहरू गर्न उत्सुक वा कडा चाहना राख्नुपर्दछ। अधिक, यदि हामी परिवर्तनहरू गर्न डरायौं भने, हामी सीमित विकासको जोखिमको सामना गर्दछौं। कि आजाक्स, लिभरपूल र त्यसपछि वोल्भ्स देखि कि आन्दोलन विकास को लागी उनी निडर दृष्टिकोण दर्शाउँछ।
यो Lifebogger आफ्नो आमाबाबु - Marianne र इवान सराहना गर्न behooves। ती Ki की क्यारियर विकास मा प्रमुख प्रभाव हो। उनको हजुरआमालाई बिर्सनु हुँदैन, जसलाई हामीले विश्वास गर्‍यौं उसको बाल्यकालमा पनि उनको भूमिका छ।
की-जना होभरमा हाम्रो बायो डाइजेस्ट गर्न समय निकाल्नु भएकोमा धन्यवाद। Lifebogger मा, हामी कथाहरूको बारेमा डेलिभरीको लागि सही प्रयास गर्छौं डच फुटबल खेलाडीहरू। कृपया हामीलाई सचेत गराउनुहोस् (टिप्पणी वा सम्पर्कको माध्यमबाट) यदि तपाईंले के केहि जान होभर स्टोरीमा सही नदेखिने कुरा देख्नुभयो भने।
रायन ग्रेभेनबर्च बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
परिमार्जित मिति: मे १,, २०१ 6